Ilaah baa mahadleh, Caalamiinta Rabbigood ah. Nabadgelyo iyo naxariis Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato.
Ku: Allaah, Rabbigii abuuray Ururka Islaamka, Ururka Jaamacadda Carabta, UN, USA, EU, UN, USA, EU,IGADD, Somaliland, Puntland, Koonfurta Soomaaliya iyo SSH (Sool, Sanaag iyo Hawd).
Akhristayaal Ilaah wuu ogyahay waxa uurkeena ku jira iyo waxa aan bannaanka soo dhigno umana baahna in waraaq loo qoro. Ramadaanka waa inaan uga faa’iidaysanaa aakhiro iyo adduunba. Marka waa inaan xoogga saarnaa aakhiro maxaa yeelay iyadaa daa’im ah. Sida aan la socono abaaruhu waxay ka midyihiin waxyaalaha la isku imtixaamo si dadku u ogaado in roobka uu Ilaah kaliya keeni karo oo ay Ilaahay ugu noqdaan. Haddii la rabo in abaarta laga baxo oo kaalmo la helo waa in arrimaha loo wajahaa sida ay ukala horreeyaan.
1. Horta roobka cid aan Allaah ahayn oo keeni karta ma jirto. Haddii UN, USA iyo EU isutagaan ma keeni karaan. Wax cusub maahan in dadka kaalmo ka raadsadaan waxa gacmaha dadka kale ku jira oo ay awoodaan laakiin yaa malaayiin dad iyo duunyo ah mucaawino dad ku haqab tiri kara? Marka ugu horraysa waa in roob iyo raxmad Ilaah la waydiistaa. Qofkii caqli leh wuxuu ogaan karaa awoodda Ilaah. Waa ogayn in dabkii dhowaan ka dhaxay California uu roobku wax ka damiyey. Dadkii Maraykanku waxay dhaheen samadii baa na caawisay. Haddii Maraykanka oo qooqay ay saas roob ugu baahanyihiin maxaad mooddaa dad muslimiin ah oo noloshoodu ku xirantahay duunyo?
2. Tan labaad waa in dadka Soomaaliyeed isku tashadaa. Haddii dadka Soomaaliyeed ee qurbaha joogaa uu qof walba bixiyo 10 Doolar waxay uruurinkaraan 10-naan malyan oo Doolar oo wax badana ka badan lacagaha UN sanadkiiba Soomaaliya u qoondeeyaan. Taasina waa dacfi haysta dadka Soomaaliyeed oo aan waxooda aaminsanayn. Waa arrintaas waxa Islaamku noogu boorriyaa inaan iskaalmayno.
3. Ma maqal cid diiday in hay’ado kale laga dalbado kaalmo iyadoon labadaas qodob oo kore la jabin.
Maantadan aan qorayo maqaalka oo bisha Ramadaan tahay 10 haddii Isniintii la soomay ama 11 haddii Axadii la soomay oo ku beegan 5/11/03. Haddii Axadii koow ahayd waxaa lagu jiraa tobankii labaad ee Ramadaan laakiin haddii Isniintii ay koow ahayd waxaa lagu jiraa maalintii u dambaysay tobankii koowaad. Sidaan la socono waxaa Ramadaanka loo sheegay raxmad, dambi-dhaaf iyo cadaab-iska-xorayn. Ilaah baan arrimahaas oo dhan waydiisanaynaa.
Akhristayaal sida aan la socono aayadda ah “ wa idaa sa’alaka cibaadii cannii fa’innii qariibu ujiibu dacwataddaacii idaa dacaani falyastajiibuu Lii walyu’minuu Bii lacallahum yarshuduun” waxaa Ilaahay dhexyeelay aayadaha ka hadlaya Ramadaanka. Halkaas waxaa ku jira xikmad Rabbaani ah. Waxaan Allaha Raxmaanka ah ka beryeynaa in dadka Soomaaliyeed galabta xareed ka cabbaan. Sidii Nabigu ku ducaysan jiray waxaan Ilaah ka baryeynaa roob wanaagsan oo aan dhib lahayn oo aan dadka iyo duunyada wax u dhimin oo meel walba buuxsha oo aan lahayn aaffo iyo cudur midna. Ma jirto bil aan Ramadaanka ku doorsanayno sidoo kale ma jirto maalin aan maanta roob uga baahi badanahay. Marka Ilaahoow roob nasii.
Marka aayaddaas aan kor ku xussay waa aayad ku rajo gelinaysa oo Ilaah leeyahay haddii Nabi Muxamadoow (SCW) ay addoomahaygu ikaa waydiiyaan Anigu waan udhowahay. Ilaahay aayaddan Nabi Muxamadoow dheh ma oran. Ilaahay Isagaa sheegay inuu dhowyahay oo uu ajiibo qofkii barya. Marka maxaa ka wanaagsan in Ramaadaanka aan Ilaah ka barino wax aakhiro iyo adduun na anfaca.